Archive du 20180823
Marc Ravalomanana Neken’ny HCC ny maha kandida azy
Kandida 36 tamin’ny 46 no nahafeno fepetra, ka afaka ny handray anjara amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany amin’ny 7 novambra ho avy izao. Kandida 10 izany no nihintsana noho ny tsy fandoavana ilay antoka 50 tapitrisa ariary miampy tsy fahafenoan’ny antontan-taratasy .
Rajaonarimampianina sy Rajoelina Ireo antony nahatonga ny fisarahana…
Mbola samy mametra-panontaniana ny rehetra hatramin’izao hoe: inona tokoa no antony nanilihan-dRajaonarimampianina an’i Andry Rajoelina taminin’ny 2014 ?
Saraha Rabeharisoa “Misy ambadika hafahafa ny fahamaroan’ny kandida”
Hisokatra ny pejin`ny fampielezan-kevitra sy ny fandatsaham-bato. Be ny lesoka hatramin`izay ary efa an-taonany maro no miaina fifidianana tsizarizary.
Depiote Clarisse Rasendramiadana “Fantatry ny vahoaka izay nanorina sy nanangana fa tsy namotika.”
Tonga nitokana ny tohatohabato mirefy 15 metatra sy paompin-drano vaovao tao Nanisana omaly ny depioten’ny boriborintany faha-5, Clarisse Rasendramiadana.
Fanehoan-kevitra etsy sy eroa Maro ny Malagasy efa tsy azo ampiesonina intsony
Raha noheverina fa hangina sy hangatsiaka ny tontolom-pifidianana atao amin`ny 7 novambra 2018
Kandida Serge Imbeh Jovial “Atahorana aho matoa kianina”
Manoloana ny fanakianana na fanaratsiana kandida ho filoha, dia atahorana ianao matoa kianina, saingy izaho tsy hanao izany, hoy ny kandida Serge Imbeh Jovial, kandidan’ny antoko Antoky ny Fivoaran’ny Malagasy (AFIMA),
Jean Max Rakotomamonjy “Mila fitoniana sy fihavanana ny Malagasy.”
Anisan’ireo 36 mianadahy amin’ireo kandida ho filoham-pirenena neken’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana handray anjara amin’ny fifidianana atao ny 7
Tanora TIM Analamanga Hanao be fiavy eny Mahamasina
Vonona ireo Tanora TIM mpanohana an’i Marc Ravalomanana, amin’ny hetsika fanehoana ny firaisankina ho fanohanana azy, ny sabotsy 25 aogositra ho avy izao,
Tanora TIM boriborintany faha-VI Hisokatra ny 3 septambra ny “cours gratuit"
Mitondra anjara ny anjara birikiny amin’ny fanasoavana ny mpiara-belona ny Tanora Tiako i Madagasikara. Maro ny hetsika efa nataon’ny tanora TIM eny amin’ny boriborintany faha-6,
IREO KANDIDA NIHINTSANA
Miisa folo ireo kandida tsy nankatoavin'ny HCC ny firotsahan-kofidiana. Tsy nahafeno ny fepetra, indrindra fa ny fandoavana ny vola 50 tapitrisa ariary no tsy nandraisana azy ireo.
Izaho ho aho mbola te irotsaka !
O ry Jean aa ! Raiso ao ho aho ny anarako fa izaho mbola te irotsaka! Henoko mihitsy iny antsonao iny hoe efa mikatona ny vavahady fa izaho koa mba te ho vedety.
Faha-20 taonan’ny Radio Feon’Imerina Hosokafana amin’ny rindran-kira etsy amin’ny CC ESCA
Hankalaza ny faha-20 taona niorenany amin’ity 2018 ity ny Radio Feon’Imerina RFIM 101.6 MHZ izay manana ny tarigetra « Harena ny fahasamihafana »,
Rallye du Boeny Hanomboka anio alakamisy ny andiany faha-13
Taorian’ny Rallye Motul niatrehan’ireo mpifaninana ny dingana voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara natao tamin’ny 25-26-27 mey 2018 sy ny Rallye Asacm natao tamini’ny 22-23-24 jona 2018
Sady mahatsikaiky no miha mampalahelo hatrany ny tontolo politika eto Madagasikara.
Hopitaly CHU-JRA sy Befelatanana Efa samy mahatsabo tsara ny homamiadana
Efa azo sitranina tsara eto amintsika ny aretina homamiadana fa tsy voatery mandeha any ivelany intsony ny marary.
Toekarena marin-toerana sy maharitra Maro ireo tanjona tsy maintsy tratrarin’i Madagasikara
Marefo ny toekaren’i Madagasikara ary tsy marin-toerana ny harifaobe. Misy ny fetra ezahina raha tiana ho tojo ny fampandrosoana ny firenena Malagasy.
CENAM 67 Ha Namoaka mpiofana 282 mianadahy
Namoaka mpiofana 282 ny Centre National de l’artisanat Malagasy etsy 67 ha omaly. Ny 151 amin’izy ireo dia teto amin’ny Faritra Analamanga avokoa izay notolorana mari-pahaizana tetsy amin’ny ANS Ampefiloha.
Niisa 10 ireo kandida nihitsana tsy afa-mandray anjara amin’ny firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy izao. Mbola miisa 36 be izao kosa anefa na izany aza ireo tafajanona.
Ady amin’ny fahantrana Hampiasa ny tany sy ny masomboly ny HAFARI Malagasy
Anisan’ny mbola hilofosan’ny fikambanana HAFARI Malagasy hatrany hatreto ny ady amin’ny fahantrana misy eto amin’ny firenena.
UNICEF Madagascar Michel Saint-Lot indray no hitarika azy
Taorian’ny tahirimbola iraisam-pirenena dia tonga nampahafantatra ny taratasy fanirahana (lettre de créance) azy ihany koa ny solontena vaovaon’ny famatsiam-bolan’ny
Fitondrana tetezamita Nampitondra faisana ny orinasam-panjakana
Tsy mety tafarina mihitsy ny orinasam-panjakana potika noho ny fitantanana tsy mahomby tamin’ny tetezamita (2009-2013). Anisan’ireny ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka Air Madagascar sy ny JIro sy RAno Malagasy.